हाम्रो बारेमा - प्टियान शहर ह्यान्डसम होम डेकोर कं, लिमिटेड
+86 185 18559596 90 ०२१7
*० * cm० सेमी
*० * १०० सेमी
*० * cm ० सेमी
*० * १२० सेमी
*० * १cm० सेमी
*० * १ 160० सेमी
*० * २०० सेमी
१०० * १०० सेमी
१०० * १२० सेमी
१०० * १cm० सेमी
१०० * २०० सेमी
१२० * १cm० सेमी
*० * cm० सेमी २
थ्रीडी मेटल वाल प्यानल
90 * 90 सेमी
Handsome Home Decor १ 1998 1998 in मा स्थापना भएको चीनको दक्षिणपूर्वको समुद्री तट शहर पुटियान शहरमा अवस्थित छ जुन हस्तकला 3D थ्री मेटल आर्टमा विशेषज्ञ छन्। अहिले सम्म, त्यहाँ निम्न रूपमा series श्रृंखलाहरू छन्:
१) CHB (रंगीन एल्युमिनियम चित्रकला)
२) एचबी (एल्युमिनियम चित्रकला)
)) LH (एल्युमिनियम रिलीभो, जुन तेल चित्रकारी र एल्युमिनियम मूर्तिकलाको संयोजन हो)।
)) एलईडी चित्रकारी
हाम्रो कारखानाले 000००० वर्ग मीटर र १००० वर्ग मिटर नमूना कोठा ओगटेको छ। हामी "क्वालिटी पहिले, सेवा पहिले, निरन्तर सुधार र ग्राहकहरूको आवश्यकता पूरा गर्न नवीनता" को सिद्धान्तमा अडिग छौं।
थ्रीडी मेटल तेल चित्रकारी के हो
थ्रीडी मेटल तेल चित्रकला एक धेरै नयाँ उत्पादन हो, यो ब्रश गरिएको एल्युमिनियम प्लेटमा हातले पेन्ट गरिएको छ। क्यानभास चित्रहरु भन्दा भिन्न, धातुका मानिसहरु कडा धातुको इन्धन र लाइटमा धनी थ्रीडी रिफ्लेक्सन प्रभावको साथ छन्, विशेष रूपमा भित्री घर, होटल, अफिसका लागि उत्कृष्ट। सजावट मा।
पेंटिंग अघि समय पछि एल्युमिनियम सतह पॉलिश गरिएको छ। एल्युमिनियम बोर्डमा सुन्दर शिराहरू धेरै चोटि पलिश गर्न आवश्यक छ बनाउनका लागि तिनीहरू मधुर र जीवन्त देखिन्थे।
एल्युमिनियम बोर्ड चित्रकारी एल्युमिनियम पेन्टिंगबाट नयाँ डिजाइन र विस्तारित उत्पाद हो।
बोर्डमा ह्यान्ड पेन्ट अघि पॉलिश गरिएको एल्युमिनियम बोर्ड, र पेंटिंग चम्किलो र उत्तम बनाउन स्पष्ट कोटिंगलाई कभर गर्नुहोस्।
करीव new० नयाँ डिजाइनहरू प्रत्येक महिना विकसित हुनेछन् र सबै नमूना कोठामा राखिन्छन्, जुन १००० वर्ग मिटर कभर हुन्छ। तपाइँले हामीलाई एक भ्रमण भुक्तान गर्न स्वागत छ।
ह्यान्ड्स आर्ट्स विश्वव्यापी ब्रान्ड र उत्पादनहरूलाई लोकप्रिय बनाउँदै प्रत्येक वर्ष क्यान्टन फ्यायर र केहि अन्य अन्तर्राष्ट्रिय फर्नीचर मेलाहरूमा भाग लिन्छ।
निरन्तर प्रयत्न गरेर, ह्यान्ड्सम आर्ट्सले अब एक विश्वसनीय क्रेडिट र राम्रो प्रतिस्पर्धाको साथ हाम्रा ग्राहकहरु बीच उत्कृष्ट प्रतिष्ठा जितेको छ। हामीलाई हातमा साथ व्यवसाय विस्तार गर्न स्वागत छ!
नमूना कोठा को शैली
क्यान्टन फेयर शो
ह्यान्डसम होम डेकोर चीनमा थ्रीडी मेटल तेल चित्रकलाको पहिलो पेशेवर निर्माता हो जुन सबै समयमा सबै भन्दा राम्रो गुण हो। तपाईं केवल हामीलाई विश्वास गर्न सक्नुहुन्छ र विश्वास गर्न सक्नुहुनेछ हाम्रो अनौंठो र रचनात्मक चित्रहरूले तपाईंलाई ठूलो सफलता ल्याउन सक्छ!
चिगाang औद्योगिक क्षेत्र, हान्जियांग डिस्ट, पुटियान, चीन
+86 59437 378838282२
+86 59437 378838396